Imibuzo ngoshonele esitamkokweni ebusuku | IOL Isolezwe
Imibuzo ngoshonele esitamkokweni ebusuku
Isolezwe / 4 March 2013, 09:45am / INTATHELI YESOLEZWE
INDODANA kaNksz Tenza, uMnuz David Ramatlateng, ithi bewumndeni bafuna izimpendulo kuMasipala weTheku ukuthi ukuvumela kanjani ukushona komuntu ngendlela unina ongene emgodini obungavaliwe ashone ngayo. Isithombe: S'BONELO NGCOBO
USASHAQEKILE umndeni kaNksz Veronica Ntenza oshone ngoFebhuwari 22 ezihambela nesoka lakhe emuva kokuthi angene emgodini owawusuhlale isikhathi esdie ungavalwa eduze nomgwago u-Rodger Sishi, e-Westville. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
USATHUTHUMELA umndeni wowesifazane wase-Mariannhill oneminyaka engu-53 oshone emasontweni amabili edlule emuva kokukhalakathela esitamkokweni esivulekile esiseduze komgwaqo u-Rodger Sishi, e-Westiville.
UNksz Veronica Tenza wayehamba nesoka lakhe uMnuz Mvumeni Ndlovu ayelivakashele ngempelasonto yesigameko bephuma ukuyobheka abangani babo ngasenxanxatheleni yezitolo i-Blue Heights.
Ngokwejwayelekile babehamba ngezinyawo kanti kwathi uma kugamanxa ihora lesishiyagalombili ebusuku banquma ukuphindela endlini kaMnuz Ndlovu ose-88 A emgwaqweni u-Rodger Sishi obuwaziwa ngo-Blair Atholl.
“U-Veronica wathi uphiswe ukuchama wabe eseshobela ngemuva kwezihlahla eziningi eziseduze nomfula lapho kunendlu engahlali muntu okunendawo emnyama engenawo amalambu emgwaqweni. Ngalinda imizuzu engaphezu kwemihlanu elokhu engaqhamuki ngamemeza kaningi kodwa lutho,” kusho uNdlovu.
Uthi wabe esephuthaza ebumnyameni ezama ukubheka uNksz Tenza nalapho wathola okushaqisayo embona evele ngezinyawo esitamkokweni.
“Ngezwa izinyawo zakhe ezazibheke phezulu ikhanda lakhe lingaphakathi emgodini. Ngazama ukumdonsa kodwa wayesinda kakhulu,” kusho uNdlovu ethi ngaleso sikhathi uNksz Tenza wayengasanyakazi.
Uthi wadideka ikhanda wahlala phansi wakhala wabe esebonwa umshayeli wemoto eyayidlula owabiza amaphoyisa afika emuva kwemizuzwana nje.
Isidumbu sikaNksz Tenza sayiswa emakhazeni, uNdlovu wagcinwa esiteshini samaphoyisa ubusuku bonke wadedelwa ngakusasa emuva kokuphonswa imibuzo.
UMnuz Shan Govender obambele iPhini leNhloko yoMnyango wezemiGwaqo kuMasipala weTheku, uthe imininingwane ngengozi ayikacaci kahle njengoba uphenyo lwamaphoyisa lungakaqinisekisi lutho.
Uthe emigodini ebalelwa ku-360 000 eseThekwini engu-200 000 yayo ngeyezinkampani ezizimele okubalwa u-Neotel, Telkom, Dark Fibre Africa, Link Africa, Vodaco no-MTN.
Uthe izivalo zemigodi ezilahlekile noma ezifile zijwayele ukubuyiselwa esikhathini esingangamahora angu-24.
Ebuzwa ukuthi kungani umgodi oku-Rodger Sishi ubusuhlale isikhathi eside ungavaliwe uthe: “Bekuyingxenye yohlelo lokuthutha amanzi ahamba ngaphansi komhlaba kule ndawo kodwa umgodi ubusithwe utshani obesebukhule babude kakhulu, uMasipala ubungazi ukuthi isivalo sakhona asisekho nokuthi sekuyisikhathi esingakanani kunjalo.”
Indodana kaNksz Tenza uMnuz David Ramatlateng ivakashela indawo yesigameko yehlulekile ukuzibamba yasikhihla isililo yakhuleka eduze nomgodi okushone kuwo unina.
“Ukushona kwakhe singalindele kusishaqisile, kunzima ukwamukela uma ubheka indlela okwenzeke ngayo. Sidinga izimpendulo, ungene kanjani emgodini? Ubungavaliwe ngani?” kubuza uMnuz Ramatlateng.
NgoMgqibelo umndeni wakwaTenza weza endaweni yesigameko ukuzolanda uNksz Tenza ukuze ayofihlwa kubo emakhaya.
UNdlovu ukhala uyazithulisa ngesithandwa sakhe kanti uthi akazi ukuthi ingozi enjena ingenzeka kanjani endaweni enakekelwa kahle ngalolu hlobo.
Ngesikhathi ivakashelwa le ndawo kutholwe iloli lakamasipala libheka umgodi kwathi ngoLwesithathu bese kukhona ukhonkolo omkhulu obekwe ngaphezulu owabuye wasuswa ngoLwesine kwabekwa isivalo esilingana nomgodi.